Sida looga takhaluso dufanka uurku jirta: Cabitaannada sonkorta leh waxay kordhiyaan xaddiga dufanka caloosha ee aad sidato - Wardeeq 24 TV Sida looga takhaluso dufanka uurku jirta: Cabitaannada sonkorta leh waxay kordhiyaan xaddiga dufanka caloosha ee aad sidato Wardeeq 24 TV
Home Caafimaad-ka Sida looga takhaluso dufanka uurku jirta: Cabitaannada sonkorta leh waxay kordhiyaan xaddiga...
Sida looga takhaluso dufanka uurku jirta: Cabitaannada sonkorta leh waxay kordhiyaan xaddiga dufanka caloosha ee aad sidato
Baruurta visceral waxaa badanaa loo yaqaanaa dufanka caloosha, waxayna u egtahay inay ku duubmaan xubnahaaga gudaha. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay dhibaato caafimaad oo halis ah inay qaado dufan badan oo visceral ah. Taasi waa sababta oo ah unugyada baruurta waxay soo saaraan calaamadaha caabuqa iyo hormoonnada oo kordhiya halista cudurrada daba dheeraada. Mid ka mid ah hababka ugu wax ku oolka badan ee looga takhalusi karo dufanka xubinta taranka ayaa ah in la yareeyo tirada cabitaanka sonkorta leh ayay leeyihiin khubaradu.
Iyadoo la adeegsanayo xogta daraasadda Framingham, waxaa la ogaaday in dadka da’da dhexe ah ee ku raaxeysanaya cabitaanka fudud maalintii ay ku kordheen dufanka dareeraha ah.
Wadarta kaqeybgalayaasha 1,003 ayaa ku lug lahaa, iyada oo xogta cuntada lagu soo ururiyey aasaaska iyo lixda sano ee dabagalka.
Marka loo barbardhigo dadka aan waligood cabin cabitaannada sonkorta leh, macaamiisha maalinlaha ah waxay urursadeen boqolkiiba 27 boqolkiiba dufanka badan ee jirka, baarayaasha ayaa helay.
Tan waxaa ka mid ahaa cabitaanno ay ku badan yihiin sukrose iyo fructose sare-sharoobada, sida casiirka khudradda, iyo cabbitaannada kaarboon iyo kuwa aan kaarboon lahayn oo leh sonkor lagu daray.
Daraasadu waxay ka digtay in sonkorta siyaadada ah lagu daro, gaar ahaan fructose, ay keento dufanka xad dhaafka ah iyo caabbinta insulin-ta, maadama dufanka dareeraha ah loo arko ‘xubin’ kaligeed sababtoo ah saamaynta ay ku leedahay shaqada hormoonka iyo caabuqa
Previous articleInqilaabkii milateri ee daruuraha ayaa gacanta ku dhigay jaadka, dhagaxyada Myanmar
Next articleAqoonyahan Hindi Mareykan ah ayaa ka codsaday Mareykanka in loo diro AstraZeneca Jabs Hindiya